MUDDADA BEERITAANKA YAANYADA EE GOBOLKA KIROV, ARKHANGELSK, IYO SIDOO KALE MARKA AY U YIMAADAAN YAANYADA OMSK, URAL, SIBERIA IYO GOBOLO KALE? - BEER CAGAARAN
Sida loo doorto waqtiga saxda ah ee beerto yaanyada gobolka Kirov, Siberia iyo gobolo kale? Talooyin iyo xirfado
In jardiinooyinka Russia, yaanyada waxay qabsadeen meel gaar ah, waxaa loo isticmaalaa samaynta saladh, maraq, canab iyo caano.
Laakiin si aad naftaada u xakameyso miraha dhadhan fiican leh, waxaad u baahan tahay inaad ogaato marka ay tahay in la beeray. Iyo halkan gobolka ee dalkayaga weyn waa mid muhiimad weyn.
In article ah waxaan si faahfaahsan u tixgelin doonaa ku-tiirsanaanta wakhtiga beerto ee gobolka iyo waxa doorasho khalad ah ee waqti u horseedi kartaa, iyo sidoo kale ogaado marka ay beerto yaanyo ee gobollada gaarka ah ee dhulka.
Ku tiirsanaanta taariikhaha beeraha ee gobolka
Muhiim ma aha oo kaliya in la ogaado sida loo beeray yaanyada saxda ah, laakiin sidoo kale in la fahmo in wakhtigu uu ka duwan yahay gobolka oo dhan. Taariikhaha beerashada yaanyo yaanyo waxay si toos ah ugu tiirsan yihiin sifooyinka dhaqanka noolaha, muhiimada wayni waa xaaladaha iftiinka iyo heerkulka ee gobol kasta. Iyadoo la tixgelinayo xaqiiqda ah in gobollada kala duwan ee Russia waxaa jira heerkul kala duwan, waqtiga beerto for yaanyada si aad u kala duwan.
Waxaa kululeynaya cimilada gobolka, horaantii aad beeran kartid yaanyada. Sidaas darteed in gobollada koonfurta ee Russia, yaanyo lagu beeray karaa dhamaadka February, iyo laba bilood ka dib, iyaga ku beeraan dhul furan. Waxaa lagugula talinayaa inaad sameysid filin hoy ku meelgaar ah, ka dibna kama cabsan kartid guska gu'ga, kuwaas oo ah muddo gaaban, laakiin waxay burburin kartaa miraha oo dhan. Bacriminta iyo noocyo dhexdhexaad ah ayaa lagu beeray koonfurta laga bilaabo Maarso 1 illaa 20-ka Maarso, iyo marka ay horay u jireen 60-65 maalmood, waxaa lagu beeray dhul furan.
Noocyada dambe ayaa la beerayaa laga bilaabo Abriil 1aad, laakiin waxa fiican inaad sameyso wiig ka dib, si dhulku u diirran yahay.
Maxay keeni karaan wakhtiga gaaban ee khilaafka gobolka ee khaldan?
Haddii yaanyada la beeray wakhti aan la sameyn karin, cawaaqibta waxay noqon kartaa mid adag. Ugu badnaan waa in la sheegaa si gooni ah:
Haddii geedo lagu beeray gobo aan lahayn iftiin ku filan waqtigaan, markaa waxaa jira halis ah in aan horumar laga gaarin jiilalka. Si aad u kobciso, waxay u baahan doonaan waqti badan. Laakiin maaha geedka oo dhan, laakiin kaliya qaybta ka jirta dhulka hoostiisa. Waxaa cad in la sugo kiiskan, goosashada fiican waa wax aan macquul ahayn.
In gobollada waqooyiga ee Russia, waxaad u baahan tahay si gaar ah taxaddar - inta badan yaanyada lagu beeray marka dhulku aad u qabow. Tani waxay keenaysaa xaqiiqda ah in dhirta la yaabay. Xaaladdu waa la joojin karaa iyada oo geedo lagu dhejiyo dhalooyin biyo kulul ah, laakiin si looga fogaado dhibaatada aan loo baahnayn, waxay ka fiican tahay in la beero geedo waqtigeeda.
Waa muhiim: si loo yareeyo waqtiga abuurka, waxaa lagula talinayaa in ay horay u baxaan. Tani waxay si gaar ah muhiim ugu tahay gobollada Waqooyiga ee Ruushka, halkaas oo xagaaga uu gaaban yahay oo aan had iyo jeer badanaa qorraxda.
Goorta ay tamaandhada dhulka ku ridaan?
Bannaanka uxiiso badan ayaa aaminsan in Siberia, yaanyada waa in la beeray sida ugu dhakhsaha badan, ka dibna waxay sii kordhi doonaan dhakhso. Dhab ahaan, tani ma aha kiiska. Siberia, maalmaha Febraayo waa gaaban, iftiinka iyo qorraxda kuma filna, haddii aad abuurto miraha waqtigaan, waxaa jira khatar ah in la helo dhir aan cidhiidh ahayn oo daciif ah. Si looga fogaado khaladaadka caanka ah, waxaa muhiim ah in si cad loo xisaabiyo taariikhda beereed.
Ka hor inta beerto geedo ee Siberia, waxaad u baahan tahay inaad ogaato Xaabood oo ah 2 bilood jir ayaa xididdada qaadata, marka ugu horreysa ee ay bilaabaan inay bilaabaan iyaga. Haddii aad qorshaynayso inaad beerto yaanyada furan, ka dibna sariiraha waa in aan la beeray ka hor qeybtii hore ee June. Sidaas, abuur ah waa in la beeray qeybtii hore ee April. Haddii uu jiro aqalka dhirta lagu koriyo, wakhtiga waxaa loo rogi karaa 10 maalmood ka hor.
Kalandarka lunar waa muhiim. Sida laga soo xigtay isaga, waxaa wanaagsan in la abuuro abuurka yaanyo ee Siberia Febraayo 21, 25 iyo 28 ama March 20, 21, 22, 25. Maalmaha ugu wanaagsan ee lagu beerayo yaanyada bisha Abriil waa 10, 3 iyo 17 lambarrada.
In Omsk, waxaa ugu wanaagsan in la bilaabo beeritaanka yaanyada lahayn wax yar ka hor qeybtii hore ee April. Laakiin muddadaa oo kale muddooyinka khibraduhu u arkaan inayan ugu fiicnayn. Laakiin tani maaha sabab loogu kalsoonaado, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad doorato maalmaha ugu wanaagsan ee tan (haddii aad ku tiirsan tahay jadwalka maskaxda, waa 1,2 iyo 12 lambarrada).
Sidii hore loo sheegay Heerkulka iyo xaaladaha iftiinka ayaa muhiim u ah. Haddii aad ku beeranayso yaanyada gobolka Arkhangelsk ka hor inta aan loo baahnayn, waxaa jira khatar ah inaad markaa dib u dhigto. Haddii aad ku beeri geedo aqalka dhirta lagu koriyo ama aqalka dhirta lagu koriyo, dhibaatooyinka hawada iyo heerkulka ciidda ayaa bilaabi doona.
Waa inaadan beeran geedo hore, maadaama ay tahay in la koro daciifinta, hoos udhaca oo aad u sarreeya. Markaas waa inaad lacag badan ku bixisaa kuleylinta, iftiinka iyo shaqo kale oo xaqiiqda ah in aad hesho goosashada wanaagsan.
Wixii gobolka gobolka Arkhangelsk, waqtiga ugu wanaagsan ee beeritaanka yaanyada waa laga bilaabo Maarso 15 ilaa Maarso 20, tani waxay khuseysaa Beelaha iyo noocyada hore. Waxaa fiican in la gooyo Berriga ugu horeeya Bisaylkiisa hore, horraantii Abriil (laga bilaabo 1 ilaa 5).
Bacriminta iyo noocyo dhexdhexaad ah waa in la beeraa laga bilaabo Maarso 20 ilaa Abriil 10 oo ah dhul furan ama isticmaal filim, geedo waa inay ahaataa ugu yaraan laba bilood. Xaaladahan oo kale waa mid aan habboonayn in la beero noocyo dambe ee yaanyada, sida xagaaga waa kulul, laakiin aan aad u dheereyn. Haddii ay jirto rabitaan ah in ay koraan noocyo dambe, markaa waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho koriyo oo ah nooca daboolay ama lagu koriyo, waa inaad isticmaashaa iftiin dheeraad ah.
Haddii tamaandhadu aad u dheer tahay, waa in lagu beeraa xaaladaha Ural laga bilaabo Febraayo 20 ilaa Maarso 10. Haddii la qorsheynayo in lagu soo celiyo yaanyada aqalka dhirta lagu koriyo bisha Abriil, markaa maalmaha ugu fiicani wuxuu noqon doonaa laga bilaabo Febraayo 15 ilaa 28.
Iskudhufka xilliga barbariga iyo yaanyada bislaaday ee geedo waa in lagu beeraa bisha Maarso. Waxaa si weyn loogu taliyey jadwalaha dayaxa, oo dooranaya maalmihii ugu fiicnaa.
Gobolka Kirov, yaanyada la beeray laga bilaabo Febraayo 25 ilaa March 5. Xaaladdan, waxaan ka hadleynaa Beelaha iyo noocyo hore. Marka dhirta ay gaarto heerkul ah 15-25 cm, waxaa lagu wareeri karaa dhulka, laakiin waa in aan fahannaa in mid kastaa uu leeyahay ugu yaraan 8 caleemo.
Gobalka Kirov, heerarka kuleylka ah ma ahan kuwo aan caadi ahayn, si looga fogaado saameynta xun, waa lagama maarmaan in la rakibo kabaha birta, markaa waxaa had iyo jeer suurtogal ah in si dhakhso ah loo rakibo filim difaac ah.
Noocyada dhexdhexaad ah ee gobolka Kirov ayaa si fiican loo beeray tobankii sano ee hore ee Maarso, iyo noocyo goor dambe waa in la beeray laga bilaabo March 20 ilaa bartamihii April. Waqtiga laga beerto noocyo dambe ee yaanyada, da'da geedo waa inay ahaataa ugu yaraan 70 maalmood.
Si aad u hesho dalagga hore ee yaanyada Bariga Dhexe, beeritaanka waa in la billaabaa bisha Febraayo. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad hubiso in aqalka dhirta lagu koriyo uu diirran yahay, waxaad u baahan tahay iftiin dheeraad ah. Waxaa muhiim ah in la kordhiyo dhererka maalinta iftiinka, haddii kale dhirta ayaa sii yaraanaysa. Goobta furan, waxaad bilaabi kartaa beerto horraantii Abriil.
Koonfurta ee koritaanka tamaandhada, cimilada waa ugu wanaagsan. Waxaad bilaabi kartaa iyaga horayba 20-kii Febraayo iyo ilaa maalmaha koowaad ee Maarso. Noocyo kala duwan oo yaanyo ah ayaa lagu beeray qaybta dambe ee Maarso waxaana tan la samayn karaa ilaa bartamihii April.
Waqooyi-Galbeed, horraantii cimilada kulul waxay noqon kartaa mid khiyaano leh, taas oo si xun u saameeysa koritaanka tamaandhada. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad qabsato daqiiqad marka ciidda u kululaato ilaa 30 darajo waxayna ku jirtaa todobaad. Halkan xilligan waa suurtagal in la beero yaanyada si ammaan ah, tani waxay ku saabsan tahay tobanka sano ee labaad ee Maarso. Tani waxay khuseysaa noocyada hore ee yaanyada, laakiin noocyo goor dambe la beeray ka hor qeybtii labaad ee April aan lagu talin. Xaaladaha cimiladu way ka duwanaan karaan, waa inaad isticmaashaa nalka dhabta ah, waxaas oo dhan waa wax khasaare badan iyo kharashyo dheeraad ah.
Waqtiga laga beerto geedo yaanyo ah ee dhulka u furan waa had iyo jeer shakhsi ahaan. Waa muhiim inaad marwalba fiiriso shuruudaha ugu muhiimsan - heerkulka hawada iyo dhulka. Celceliska heerkulka maalinlaha waa inuu ahaado qiyaastii 20 darajo. Haddii tan oo dhan la tixgeliyo, markaa waxaan filan karnaa goosashada qani ku ah.
Heerkulka hooseeya, iyo sidoo kale aad u sarreeya yaanyada, waa burbur. Haddii heerkulka ciidda uu ka yaryahay 12 digrii, markaa dalagga lama tirin karo. Heerkulka dabiiciga ah waxaa lagu cabbiri karaa heerkulbeegga caadiga ah ee guriga.